Culimada Soomaalida: In Nabiga sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan lagu soo qaaday diinta Islaamka | Xaysimo
Home War Culimada Soomaalida: In Nabiga sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan lagu soo...
Culimada Soomaalida: In Nabiga sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan lagu soo qaaday diinta Islaamka
Culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn caro uga muujiyay hadalka madaxweyana Faransiiska, Emmanuel Macron, kaddib dhacdadii lagu dilay macalinkii u dhashay dalkaas oo ardeydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed NNKH.
Ha’yadda culimada Soomaaliya oo kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dhaleeceyn u jeedisay madaxweynaha Faransiiska.
“Culimada soomaaliyeed iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta Islaamka iyo danaha Muslimiinta, waxay dhaleecenayaan hadalka iyo mowqifka madaxweynaha Faransiiska,” ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha ha’yadda culimada Soomaaliya oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay shirka.
Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Abuukar (Soomow) oo ka mid ah Culimada Soomaaliya ayaa dhankiisa BBC Somali u sheegay in Macron “uu dhaawac u geystay diinta Islaamka isla markaana dagaalka toos ah ku qaadayo Muslimiinta”.
“Wuxuu go’aansaday in dagaal toos ah ku qaado diinta Islaamka iyo dadkeeda, Nebiga N.N.K.H.H in sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan cad oo lagu qaaday diinta Islaamka, waa duullaan lagu qaaday dhammaan Islaamka”.
Sheekh Soomow ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhaweynayaan go’aanka qaar ka mid ah dalalka Carabta ay ka soo saareen arrintan. “Dalalka diiday waxyaabaha uu soo saaro Faransiiska waan u hambalyeyneynaa.”
Sheekh Soomow wuxuu yiri: “Dhammaan umadda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaan ugu baaqeynaa oo waajibkoodu koobaad uu yahay ilaalinta diinta, waana in arrintaas ay aad uga dhiidhiyaan oo ay xiriirka u jaraan Faransiiska.”
Balse Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in “dacaayadaha cunsurinimada iyo Islaam naceybka ah ay adeegsadaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer galbeedka, si ay u xoojiyaan danahooda siyaasadeed.”
“Khaladaadka ay galayaan cunsuriyiinta reer galbeedka ayaa hadda noqday dacaayad olole siyaasadeed ah. Macron waxyaabaha hadda ugu waaweyn ee u kalifay difaaca taasaa waxaa ka mid ah in Islaamka ceydiisa lagu galo olole siyaasadeed, wax shaqeyn karana ma ahan,” ayuu yiri.
Sheekh Cali Wajiis ayaa sidoo kale sheegay inay raacsan yihiin dalalka qaadacay badeecadaha uu soo saaro Faransiiska, sidaas darteed ay bogaadinayaan go’aannada ka soo baxay qaar ka mid ah madaxda islaamka.
“Waxaan u hambalyeyneynaa dadka soo jeediyay in la qaadaco badeecadaha uu soo saaro Faransiiska, waa in dersigaas la diraa oo la xanuujiyaa. Haddii aan nahay culimada soomaaliyeed, waxaan bogaadineynaa mowqifka madaxweyne Erdogan uu ka qaatay arrintani”.
Sheekh Yuusuf Cali Ceynte oo ka mid ahaa culimadii ka qeybgashay kulanka culimada ay ku qabteen magaalada Muqdisho wuxuu yiri: “Madaxda Faransiiska arrin aad u xun ayaa ku soo fushay oo aad u foolxun taas oo laga yaabo in wakhtiyada aanan la maqal, waxay taasi caddeyneysaa in arrintii ay soo celcel jireen reer galbeedka ee xoriyatul qowlka iyo tan diinta”.
Hadalkan kasoo baxay culimada soomaaliyeed ayaa ku soo begmayaa xilli dunida Islaamka ay ka imaaneyso dhalleeceyn loo jeedinayo madaxweynaha Faransiiska, halka qaar ka mid ah waddamada Islaamka ay ku dhawaaqeen in la qaadaco badeecadaha Faransiiska.
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa dilka macallinka, oo ka dhacay waqooyi-bari ee magaalada Paris, ku tilmaamay weerar argagixiso isla markaana sheegay in loo dilay sababo la xiriira xoriyatul qowlka.
Madaxweyne Macron oo booqday goobta, wuxuu macallimiinta u ballan qaaday in naftooda la difaaci doono.